शीर्ष3कुञ्जी तत्वहरू B2B ब्लगिgingको लागि सम्झन Martech Zone
बुधबार, सेप्टेम्बर 19, 2007 आइतबार, जुलाई 7, 2013 Douglas Karr
को तयारीमा मार्केटिंग प्रोफेसर व्यवसाय बाट व्यापार सम्मेलन शिकागोमा, मैले मेरो प्रस्तुति स्लाइडहरूलाई न्यूनतममा whittle गर्ने निर्णय गरें। टन बुलेट पोइन्टहरूको साथ प्रस्तुतीकरणहरू IMHO, डरलाग्दो र आगन्तुकहरूले विरलै प्रस्तुत गरिएको कुनै पनि जानकारी सम्झना गर्छन्।
यसको सट्टामा, म तीन सर्तहरू रोज्न चाहन्छु जुन मार्केटरहरूको टाउकोमा टाँसिएको हुनुपर्छ जब यो आउँदछ B2B ब्लगि। साथै, म दृढ भिजुअलहरू लागू गर्न चाहन्छु ताकि मानिसहरूले सन्देश याद गरून्।
मैले एउटा चित्र रोजें सेन्ट गडिन। मानिसहरूले सेठको सम्मान गर्छन् किनभने उनी मार्केटिंग र विज्ञापन उद्योगमा एक विचारशील नेता थिए। सेठसँग वर्तमानको बिरूद्ध पौडिन्छ र यथास्थिति को विफलता औंल्याउन को लागी एक उपहार छ। उसले हामीलाई सोच्न लगाउँछ। सबैले एक विचार नेताको कदर गर्दछ र एकको रूपमा मान्यता पाउनु तपाईंको व्यवसायको लागि उत्कृष्ट छ। एक विचार एक नेता को रूप मा मान्यता प्राप्त गर्न एक उत्तम माध्यम हो।
व्यक्तिहरू पृष्ठमा शब्दहरू पढ्न मन पराउँदैनन्, उनीहरू एक व्यक्तिको आवाज सुन्न मन पराउँछन्। विन्दु मा मामला मा, यो सानो दृश्य जोनाथन श्वार्ट्ज, ब्लगर र सन माइक्रोसिस्टम्स बनाम सीईओ। शमूएल जे पामिसानोबोर्डको अध्यक्ष आईबीएम - उनीहरूका सम्बन्धित साइटहरूमा लिंकहरूको पृष्ठहरूको संख्या हेर्दै।
मलाई वास्तवमा थाहा थिएन कि IBM को लागी बोर्डका अध्यक्ष को हुन् जब मैले यो अनुसन्धान गरे।
अन्तिम शब्द डर हो। यो के हो जुन प्राय व्यवसायलाई ब्लग अप प्राप्त गर्नबाट रोक्छ। ब्रान्डको नियन्त्रण गुमाउनु पर्ने डर, नराम्रो टिप्पणीहरूको डर, मान्छेको डर जसले उनीहरूको औंला औंल्याउँछ र हाँस्दछ, सत्य बोल्छ भन्ने डर। केहि तथ्या .्कले देखाउँदछ कि कसरी डरले पाठकहरूको ध्यान र ध्यान आकर्षण गर्ने केही ब्रान्डको क्षमतालाई नष्ट गरिरहेको छ। केहि अन्य तथ्या .्कले कम्पनीहरूलाई दर्साउँदछ जुन उनीहरूको डरमाथि विजय हासिल गर्दछ र त्यहाँ सबै कुरा पचाउनको लागि बाहिर राख्छ ... र तिनीहरू यसको कारण जित्दैछन्।
डर कहिल्यै रणनीति हुँदैन। कसैले एक पटक मलाई भन्यो कि तपाईं कहिल्यै पछाडि दौडन सक्नुहुन्न जब तपाईं सधै पछाडि पछाडि हेर्नुहुन्छ। धेरै धेरै कम्पनीहरू असुरक्षित छन् र अज्ञातसँग डराउँछन्। विडम्बना यो हो कि उनीहरूको ठूलो डर सायद साकार हुनेछ किनभने उनीहरूले उनलाई जितेनन्।
टैग: b2b ब्लगिंग
सेप्टेम्बर 20, 2007 मा 12: 43 AM
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका सबै आईटमहरू मेरो कम्पनीमा छलफलका विषयहरू हुन्। रमाईलो कुरा के हो भने त्यो पोइन्ट १ र २ सजिलो छलफल हुन्। सबैजना समान पृष्ठमा छन् र तिनीहरूलाई सत्यको रूपमा स्वीकार गर्दछ। तेस्रो बिन्दु, तथापि, लामो समयदेखि पुनःप्रयास गर्ने मुद्दा भएको छ। व्यक्ति कि त यो पाएको जस्तो देखिन्छ वा उनीहरूले पाउँदैनन्। म तिमीलाई भन्न सक्दिन कि खराब टिप्पणीको विषय सामाजिक मिडियाको केहि प्रकार नगर्न कति पटक आयो। यो यति सम्म जान्छ कि प्रतिस्पर्धीको डरले झूट * सास * पोष्ट गरेर हामीलाई तोडफोड गर्दछ। संघर्ष जारी छ।
सेप्टेम्बर 20, 2007 मा 7: 23 AM
राम्रो समाचार यो हो कि त्यहाँ b2b व्यवसाय ब्लगमा टिप्पणी अनुगमनको कुनै सेट नियम छैन। यो 'राम्रो नियम' स्थापना गर्नु जत्तिकै सरल छ जहाँ सबै टिप्पणीहरू मोडरेट गरिएका छन् र यसको मतलब टिप्पणीलाई वेवास्ता गरिन्छ वा व्यक्तिगत रूपमा जवाफ दिइन्छ। मसँग मेरो ब्लगमा ,3,000००० भन्दा बढी टिप्पणीहरू छन् र २ जना मानिस पछाडि मात्र लेख्नुपर्‍यो र उनीहरूको टिप्पणी पोस्ट नगर्ने थिएँ।
केवल मानिसहरूलाई अगाडि नै जान्न निश्चित गर्नुहोस् - यो एक व्यवसाय ब्लग हो जुन तपाइँको ग्राहकहरूसँग सञ्चार खोल्न र समाधानहरू फेला पार्न को लागी हो - कम्पनीलाई निषेध गर्न खुला फोरम होईन। साथै, यदि यी दुखी ग्राहकहरू छन् भने, तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा फिर्ता लेख्न र उनीहरूलाई भेला गर्न मद्दत गर्ने अवसरले तिनीहरूलाई फर्काउन सक्छ!
मध्यस्थता लगभग सबै ब्लगिंग प्लेटफर्मको एक राम्रो सुविधा हो। B2B ब्लगको साथ, मँ योमा जिद्दी गर्दछु!
विडम्बनाको कुरा, व्यापार मा नकारात्मकता को मुद्दा हो कि मान्छे 'मान्छे' को रूप मा व्यवसाय देख्दैनन्। विरलै कसैले कोही व्यक्तिसँग कुरा गर्छन् जस्तो उनीहरूले व्यवसाय लेख्छन्। म अनुभवबाट बोल्दै छु… जब म उनीहरूको 'हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्' फाराम भर्दछु म व्यापारलाई स्लेम गर्छु, तर जब म उनीहरूसँग फोनमा जान्छु मलाई थाहा हुन्छ कि यो सामान्यतया अर्को छेउमा व्यक्तिको गल्ती हुँदैन र म यसलाई टोन दिन्छु। ।
एक ब्लग भएको ग्राहकहरु को लागी एक व्यक्ति को लागी हेर्न र जान्न को लागी प्रदान गर्दछ - तिनीहरूलाई युद्ध को अनलाइन शुरू गर्ने जोखिम को कम गरी।
प्रतिक्रियाका लागि धन्यबाद। तपाईले राम्रो बिन्दु ल्याउनु हुन्छ म सामाजिक मिडिया को "गैर-मध्यम टिप्पणीहरू" स्कूलको सदस्यता लिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यसले मिडिया पीसको पाठक / उपभोक्तालाई सशक्तीकरणको एक निश्चित भावना उधार दिन्छ। यो, निस्सन्देह, मेरो कम्पनी भित्र डर केहि योगदान गर्न। हुनसक्छ मैले मेरो दृष्टिकोण अलि नरम गर्नुपर्छ।